Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 15:1-32
Mufananidzo wegwai rakarasika (1-7)
Mufananidzo wemukadzi akarasa mari (8-10)
Mufananidzo wemwanakomana akarasika (11-32)
15 Vateresi vese nevatadzi vaimuunganira kuti vanzwe zvaaitaura.+ 2 Uye vaFarisi nevanyori vaigunun’una, vachiti: “Munhu uyu anogamuchira vatadzi uye anodya navo.” 3 Akabva avataurira mufananidzo uyu, achiti: 4 “Ndiani wenyu anoti kana aine makwai 100, obva ashaya rimwe chete, asingasiyi 99 acho musango, oenda kunotsvaga rarasika racho kusvikira ariwana?+ 5 Uye kana ariwana, anoriisa pamapfudzi ake, ofara. 6 Uye paanosvika kumba anoshevedza shamwari dzake nevavakidzani vake achiti, ‘Farai pamwe chete neni, nekuti ndawana gwai rangu ranga rarasika.’+ 7 Ndinokuudzai kuti kuchavawo nemufaro mukuru kudenga pamusoro pemutadzi mumwe chete anopfidza zvivi zvake,+ kupfuura kufarirwa kunoitwa vanhu 99 vakarurama vasina zvivi zvavari kufanira kupfidza. 8 “Kana kuti ndeupi mukadzi ane madrakema* 10, angati kana arasa drakema* rimwe chete, orega kubatidza rambi kuti atsvaire imba yake achinyatsoritsvaga kusvikira ariwana? 9 Uye kana ariwana, anoshevedza shamwari dzake nevavakidzani achiti, ‘Farai pamwe chete neni, nekuti ndawana drakema* rangu randanga ndarasa.’ 10 Ndinokuudzaiwo kuti ngirozi dzaMwari dzinofara chaizvo kana mutadzi mumwe chete akapfidza zvivi zvake.”+ 11 Akabva ati: “Mumwe murume akanga aine vanakomana vaviri. 12 Mudiki wacho akati kuna baba vake, ‘Baba, ndipei mugove wenhaka wanga uchizova wangu.’ Saka akavagovanisa zvinhu zvake. 13 Pashure pemazuva mashoma, mwanakomana wacho mudiki akaunganidza zvinhu zvake zvese, akaenda kunyika iri kure, uye akanoparadza pfuma yake achirarama upenyu hwakaipa. 14 Paakanga asisina chinhu, munyika yacho yese makaitika nzara huru, iye akatanga kutambura. 15 Akatoenda, akanozviisa kune mumwe wevagari vemunyika yacho, uyo akamutuma kumafuro ake kunofudza nguruve.+ 16 Uye aitoshuva kudya zvekudya zvaidyiwa* nenguruve, asi hapana kana munhu aimupa chekudya. 17 “Paakazopengenuka, akati, ‘Baba vangu vane vanhu vangani vanovashandira vane zvekudya zvakawandisa, ini kuno ndichifa nenzara? 18 Ndichasimuka ndodzokera kuna baba vangu ndonoti kwavari: “Baba, ndakatadzira denga uye imi. 19 Handisisina kukodzera kunzi mwanakomana wenyu. Ndibatei henyu semumwe wevashandi venyu.”’ 20 Saka akasimuka, akaenda kuna baba vake. Achiri kure, baba vake vakamuona vakasiririswa, ndokumhanya vakamumbundira, vakamutsvoda zvinyoronyoro. 21 Mwanakomana wacho akabva ati kwavari, ‘Baba, ndakatadzira denga uye imi.+ Handisisina kukodzera kunzi mwanakomana wenyu.’ 22 Asi baba vacho vakati kuvaranda vavo, ‘Kurumidzai! uyai nenguo yakanakisisa mumupfekedze; momupfekedza rin’i muruoko rwake uye shangu mutsoka dzake. 23 Uyaiwo nemombe yakakora muiuraye, tidye tichipembera, 24 nekuti mwanakomana wangu uyu akanga afa asi avazve mupenyu;+ akanga arasika, uye awanikwa.’ Uye vakatanga kufara. 25 “Mwanakomana wake mukuru akanga ari kumunda, uye paakanga ava kusvika pamba achidzoka, akanzwa mimhanzi nevanhu vaitamba. 26 Saka akashevedza mumwe wevashandi, akamubvunza zvaiitika. 27 Akati kwaari, ‘Munin’ina wenyu auya, uye baba venyu vauraya mombe yakakora, nekuti vamuwana ari mupenyu.’ 28 Asi akashatirwa akaramba kupinda. Baba vake vakabva vabuda, vakatanga kumunyengetedza. 29 Akapindura baba vake achiti, ‘Inzwai! Makore ese aya ndanga ndichikushandirai uye hapana pandisina kumborega kuteerera mirayiro yenyu, asi hamuna pamakambondipawo kana mbudzana chaiyo kuti ndifarewo neshamwari dzangu. 30 Asi pangosvika mwana wenyu uyu akaparadza zvinhu zvenyu nepfambi, mabva mamuurayira mombe yakakora.’ 31 Vakabva vati kwaari, ‘Mwanangu, iwe unogara neni pano mazuva ese, uye zvinhu zvangu zvese ndezvako. 32 Asi tanga tichifanira kupembera nekufara, nekuti munin’ina wako akanga afa asi ava mupenyu; akanga arasika, uye awanikwa.’”
^ Kana kuti “mateko aidyiwa.”